ချင်း – Ministry of Hotels & Tourism Myanmar
ချင်းပြည်နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး မြို့တော်မှာ ဟားခါးမြို့ဖြစ်သည်။ အမြင့်ပေ ၃၀၅၃ မီတာ မြင့်၍ ခရီးသွားဧည့်သည်များနှင့် တောင်တက် ခရီးနှစ်သက်သည့် ခရီးသည်များကို ဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်။ ချင်းပြည်နယ်သည် ရခိုင် ပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မကွေး တိုင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နှင့် နယ်နမိတ် ချင်း ထိစပ်လျက်ရှိသည်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ဧည့်သည်များအတွက် ချင်းပြည်နယ်သို့သွား ရောက်ရန် အကောင်းဆုံးလမ်းမှာ ပုဂံမှ ချင်းပြည်နယ်၏ဝင်ပေါက် မင်းတပ်မြို့သို့ သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ မင်းတပ်မြို့ကို ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်း တစ်လျှောက် မော်တော်ဘုတ်စီး၍ ကမ္မ၊ ပေါက်နှင့် ကျောက်ထုမြို့တို့ကို ဖြတ်သန်းပြီး သွားရောက်နိုင်သည်။ ဝိတိုရိယတောင်(Mt. Victoria) သည် ချင်းပြည်နယ်၏ အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည် များတောင်တက်ခြင်းကို ပျော်ရ်ွှင်ခံစားနိုင်ပါသည်။ တောင်စောင်းတစ်လျှောက်တွင် လမ်း များပြတ်တောက်နေပြီး လမ်းကြိုလမ်းကြားများက မျက်စိပသာဒဖြစ်စေသော ချင်းပြည်နယ် ၏ မြင်ကွင်းများနှင့်အတူ ခရီးသွားများကို ကူညီပေးလျက်ရှိသည်။
အများစုမှာ ချင်းလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး တီးတိန်၊ လိုင်နှင့် ဗမာစကားများကို ပြောဆို ကြသည်။ ခရစ်စယာန်နှင့် ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို အဓိကကိုးကွယ်ကြသည်။
ချင်းပြည်နယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး ချင်း တောင်တန်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မကွေး တိုင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နှင့် နယ်နမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက်ရှိသည်။ ချင်းပြည်နယ်၏ အကျယ်အဝန်းမှာ ၃၆၀၁၈.၈ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၃၉၀၆.၉ စတုရန်းမိုင်) ကျယ်ဝန်းပြီး ရာသီဥတုမှာ အနည်းငယ် ပူနွေးစိုစွတ်သည်။
ချင်းပြည်နယ်ရှိ လမ်းအများစုကို တောင်တန်းများအားပတ်၍ ဖောက်လုပ်ထားသည် မှာ ချင်းတောင်တန်း၏ ပထဝီဝင်အနေအထားကို ထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ချင်းအမျိုး သမီးများ၏ မျက်နှာပေါ်တွင် မတူညီသောဆေးမင်ကြောင် အရုပ်များကို တွေ့မြင်နိုင်ပါ သည်။ ထိုဆေးမင်ကြောင်များကို ကြည့်၍ ချင်းမျိုးနွယ်စုများကို ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ရှားပါး သည့် တချို့သော ထူးခြားဆန်းပြားသည့် ဇီဝမျိုးကွဲများ စုံလင်သည့် ပန်းနှင့် တိရိစ္ဆာန်များကို ချင်းပြည်နယ်တွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ထူးခြားဆန်းပြားသည့် အပင်နှင့် တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်အမျိုးမျိုးအား တွေ့ရှိနိုင်သော စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာကောင်းသည့် ချင်းပြည်နယ်ခရီးစဉ်ကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။
သဘာဝအလှများနှင့် ပြည့်နှက်နေသော ကုန်းမြင့်တောင်တန်းဒေသ
ချင်းပြည်နယ်သည် သစ်ပင်ပန်းမန်နှင့် တိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ် တစ်ရာကျော် တည်ရှိရာ နေရာဒေသ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ရှားပါးပြီး ထိမ်းသိမ်းမှုပြုလုပ်ထားသည့် ပန်းပွင့်များ၊ အပင်များ၊ တိရိစ္ဆာန်များနှင့် အင်းဆက်များ၊ ထူးခြားဆန်းပြားသောဇီဝမျိုးကွဲများက ခရီးသွားဧည့်သည်များကို အမှတ်ရစေသည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို အထောက်အကူပေးပါ သည်။ ချင်းပြည်နယ်သည် ဒေသရင်းငှက်မျိုးစိတ်များ၊ ရွှေ့ပြောင်းငှက်မျိုးစိတ်များ အပါ အဝင် ၁၅၉ မျိုးသောငှက်တို့ပျော်စံရာ အရပ်ဖြစ်သည့်အတွက် ငှက်မျိုးစိတ်လေ့လာလိုသူများ အတွက် နိဗ္ဗာန်ဘုံအလားပင် ထင်ရပါသည်။ ထို့အပြင် ခရီးသွားဧည့်သည်များအား ထူးခြား သည့် အတွေ့အကြုံများပေးသည့် အရှေ့တောင်အာရှကျားသစ်များ၊ တောဝက်များကိုလည်း ထိုဒေသတွင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားပါသည်။
ခရီးသွားများအနေဖြင့် စိမ်းလန်းစိုပြေသော တောင်တန်းကြီးများဖြင့် ဝန်းရံထားသည့် ၉ထပ်ရေတံခွန်ကြီးတွင် သဘာဝအလှခံစားရင်း မိမိတို့နှစ်သက်ရာ ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက် နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရေတံခွန်ကြီး၏ ဘေးဖက်ရှိ ကျောက်နံရံများပေါ်တွင် ကြီးမားသော ပျားအုံကြီးများ စွဲကပ်နေသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်သည့်အပြင် ရေတံခွန်၏အပေါ်ဖက်အဆင့် များတွင် ရှားပါးသစ်ပင် ပန်းမန်များ ဖူးပွင့်နေသည်ကို ရှုမြင်ခံစားနိုင်ပါသည်။ တောင်ခြေ ရွာ မှ ရေတံခွန်သို့ သွားရာလမ်းတစ်လျှောက်တွင် သစ်ပင်များ အုံ့ဆိုင်းကာ ခရီးသွားများ အနေဖြင့် ရေတံခွန်သို့သွားရင်း သဘာဝသစ်ပင် ပန်းမန်များ၊ ရှားပါးဇီဝ မျိုးစိတ်များနှင့် တွားသွားသတ္တဝါများကိုပါ တစ်ခါတည်း လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ရိဒ်ရေကန်သည် အသည်းပုံသဏ္ဍာန်ရှိခြင်းနှင့် ဒီဇင်ဘာလတိုင်းတွင် ရေများ နီကြင်ကြင် အရောင်သို့ ပြောင်းသွားခြင်းတို့ကြောင့် လူသိများကျော်ကြားသည်။ ဤသဘာဝ ရေကန်သည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရေများ ပြည့်လျှံနေသောကြောင့် ဧည့်သည့်များ တစ်နှစ်လုံး အချိန်မရွေး လာရောက် လည်ပတ်နိုင်သည်။ ရိဒ် ရေကန်သည် ဖလမ်းမြို့နယ်၏ အနောက် ဘက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိကာ ကိုယ်ပိုင်ကားများ၊ ဘတ်(စ်)ကားများဖြင့် အလွယ်တကူသွား ရောက်လည်ပတ်နိုင်သည်။
ရိဒ်ရေကန်သည် ညီအစ်မနှစ်ယောက်၏ ဒဏ္ဍာရီဖြစ်သောကြောင့်လည်း ကျော်ကြား သည်။ ညီမဖြစ်သူ ကွယ်လွန်ပြီးနောက် အစ်မဖြစ်သူ ရိဒ်အိုင်သည် ရေကန်အဖြစ်သို့ မိမိကိုယ် ကို ပြောင်းလဲဖန်ဆင်း၍ ၎င်းရေကန်မှ ရေကိုတိုက်ကာ ညီမဖြစ်သူကို အသက်ပြန်လည် ရှင်စေခဲ့သည်။ ထိုနောက် ညီမဖြစ်သူသည် ရေကန်အနီးတဝိုက်၌ လှည့်လည်သွားလာရာမှ လုံခြုံမည့်နေရာကို ရှာဖွေရာ နောက်ဆုံး ရိဒ်ရေကန်၌ပင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့ပါသည်။
ချင်းပြည်နယ်တွင် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များနှင့် လူမျိုးနွယ်စုများစွာရှိသောကြောင့် ကမ္ဘာ လှည့် ခရီးသည်များသည် ထူးခြားဆန်းပြားသောဒေသနှင့် လူမျိုးစုများအကြောင်းကို ပိုမိုလေ့လာနိုင် သည်။ ရိုးရာဝတ်စုံများ ဆင်မြန်းခြင်း၊ အသုံးအဆောင်များနှင့် ဧရာမ နားကွင်းများ၊ ထယ်ထိုးခြင်းနှင့် လယ်ရိတ်သိမ်းခြင်းများ စသည့်နေ့စဉ်လုပ်ငန်း ဆောင်တာ များကို ခရီးသည်များမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ တွေ့မြင်နိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာပွဲတော် များတွင် လည်း ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ပါသည်။
ခရီးသည်များသည် ရွာသူရွာသားများနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်ဆံပြောဆိုနိုင်ပြီး ချင်းပြည်နယ်ရှိ လူမျိုးစုတစ်စုချင်းစီအကြောင်းကို ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည်။ ဒေသခံများသည် သူတို့၏ ရွာများကို ခရီးသည်များအား လိုလိုလားလားလိုက်လံပြသလိုကြပြီး ချင်းလူမျိုးစုများသာ သိသော ထူးခြားဆန်းပြားပြီး မထိခိုက်မပျက်စီးသေးပဲ သဘာဝအတိုင်းရှိနေသောနေရာဒေသများသို့လည်း လှည့် လည်ပို့ဆောင်လိုကြသည်။
ဟားခါးမြို့သည် တောင်စောင်းပေါ်တွင်တည်ရှိကာ သဘာဝတောတောင် အခြေအနေများကို ထိန်သိမ်းနိုင်ရန် U ပုံစံတည်ဆောင်ထားသည်။ ပင်လယ်ရေပြင်အထက် ၁၉၈၀ မီတာတွင်တည်ရှိပြီး အေးသောရာသီများတွင် အများအားဖြင့် တိမ်ထူထပ်ကာမြို့ကို ပဟေဋိဆန်စေပြီး ကြည်နူးဖွယ်ဆွဲ ဆောင်သည်။ ဆူညံသော မြို့ပြမှ အဝေးသို့ အားလပ်ရက်ခရီးထွက်လိုသူများအတွက် အေးမြသောလေ သည် လန်းဆန်းတက်ကြွမှုကို အထောက်အကူပြု ဖန်တီးပေးသည်။
ကန်ပက်လက်မြို့သည် ချင်းပြည်နယ်၏ သီးခြားဖြစ်တည်နေသောမြို့များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး မြို့၏ မထိခိုက်၊မပျက်စီးသေးသော သဘာဝရှုခင်းများသည် အဓိကအားဖြင့် နေဝင်ဆည်းဆာမတိုင်ခင် အချိန်များတွင် ညှို့ယူဖမ်းစားနိုင်သည်။ စွန့်စားလိုသော ခရီးသွားများသည် ဝိတိုရိယတောင် (Mt. Victoria) တောင်ထိပ်သို့ တက်ရောက်နိုင်ပြီး ချင်းတောင်တန်းများ၏ အလှအပရှုခင်းတစ်ခုလုံးကို အပေါ်စီးမှ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ကန်ပက်လက်မြို့သည် တောင်စောင်းပေါ်တွင် တည်ရှိသောကြောင့် တောင်ထိပ်ပေါ်တွင် ပျံသန်းသွားလာနေသော ရှားပါးငှက်မျိုးစုံများနှင့် လိပ်ပြာမျိုးစိတ်များကိုလည်း တွေ့မြင် ခံစားနိုင်သည်။
ဖလမ်းမြို့သည် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ကာ အိမ်များကို တောင်စောင်း များတွင် အဆင့်များစွာဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။ ခရီးသွားများသည် တာရွှန်းရွာ သို့ သွားရောက်၍ ချင်းရိုးရာအိမ်များနှင့်မတူ တမူထူးခြားသောရွာတည်ဆောက်ပုံများ၊ သမိုင်း အထောက်အထားများနှင့် လူမျိုး စုများကို ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်သည်။ ဗိသုကာပညာ စိတ်ပါ ဝင်စားသူများသည် ၎င်းနေရာရှိ လှပသော ကိုလိုနီအမွေအနှစ် အဆောက်အဉီများ ကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းကို ကြိုက်နှစ်သက်မည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်ပေသည်။
မင်းတပ်မြို့သည် ချင်းတောင်များဆီသို့ အလွယ်တကူသွားလာနိုင်သောမြို့ တစ်မြို့ ဖြစ်ပါသည်။ ချင်းပြည်နယ်၏ တောင်ဘက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသော မင်းတပ်မြို့သည် ဒေသခံ ပြည်သူများ၏ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာ အချက်အချာကျသော မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်ပါသည်။ လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်နှင့် မြင့်မား သော တောင်တန်းကြီးများဘေးတွင် တည်ရှိနေကြသော သစ်သားအိမ်ကလေးများ၊ မြင့်မားသော ထင်းရှူးပင်များသည် မင်းတပ်မြို့၏ ညှို့ယူဖမ်းစား နိုင်သော သဘာဝအလှ မြင်ကွင်းများ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အေးချမ်းငြိမ်သက်လှသော မင်းတပ်မြို့၏ အလှတရားများသည် ခရီးသွားပြည်သူများအား မလွတ်တမ်း လာလည်ချင်အောင် အမှန်တကယ်ပင် ဆွဲဆောင်လျက်ရှိပါသည်၊။
တီးတိန်သည် ဝင်းလက်၍ အရောင်တောက်ပသော ရေကန်ဟူသည့် နာမည်မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ “တီတိန်” ဟုခေါ်ကြသော်လည်း အသံထွက်အမှန်မှာ “တဲဒင်မ်” ဖြစ်သည်။ ဤသို့ အသံထွက်မှ ချင်းဘာသာအရ အဓိပ္ပါယ်ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဇိုမီးဘာသာစကားအရ “တဲ” ဟူသော စကားသည် ဝင်းလက်တောက်ပသော အဓိပ္ပါယ်ကို ဖော်ဆောင်၍ “ဒင်မ်” ဟူသောစကားသည် “တဖျတ်ဖျတ် တလက်လက်” တောက်ပသော အဓိပ္ပါယ်ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ရင်းနှီးဖော်ရွေလှသော ဒေသခံ လမ်းညွှန်များ၏ အကူအညီဖြင့် ကျေးလက်ဒေသတွင် တည်ရှိသော မင်းတပ်မြို့၏ အဆုံးမရှိသော အလှအပများနှင့်အတူ ဆည်များ၊ ရေကာတာများ၊ တောင်တန်းများ၊ လှိုဏ်ဂူများနှင့် ခရစ်ယာန်ဘုရား ကျောင်းများကို ကမ္ဘာ့ လှည့်ခရီးသည်များ စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါ သည်။
မတူပီမြို့သည် ထိတွေ့မှုပြုလုပ်ခြင်း မရှိလုနီးပါးတည်ရှိသော မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်ပါသည်။ သဘာဝ အငွေ့အသက်များဖြင့် နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားများကို လေ့လာလည်ပတ်ရန် မကြာမီ ကာလကမှ ဖွင့်ပေးလိုက်သည့် မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါသည်။ အပူပိုင်း၊သမပိုင်း သစ်တော များနှင့် ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသော မတူပီမြို့သည် မည်သည့်အဟန့်အတားမှ မရှိပဲ အဖိုးမဖြတ် နိုင်သော အလှတရားများနှင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ တအံ့တသြ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ကြီးကျယ် ခမ်းနားသော မတူပီမြို့၏ မထိတွေ့ရသေးသည့် အလှတရားများသည် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများ တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ရန်အတွက် ရှားပါးသောအခွင့်အလမ်းများဟုလည်း ဆိုနိုင် ပေသည်။ များပြားလှသော မျိုးနွယ်စုများ၏ နေရပ်ဖြစ်သောကြောင့် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားအနေဖြင့် ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့် လူနေမှု ဘဝပုံစံများ ကိုလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လေ့လာအတွေ့အကြုံ ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ချင်းဒေသခံပြည်သူများသည် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် သီးနှံရိတ်သိမ်းပွဲကို ပျော်ရွှင်စွာ ကျင်းပလေ့ ရှိကြသည်။ ရိတ်သိမ်းပြီးသော ဒေသထွက်ကုန်များဖြစ်သည့် နှမ်း၊ မြေပဲ၊ ကောက်ညှင်း အစရှိသည် တို့ဖြင့် ကောက်သစ်စားပွဲကိုလည်း ကျင်းပကြသည်။ ခရီးသွားများ အနေဖြင့် ချင်းပြည်နယ်၏ ယဉ်ကျေးမှု အစစ်အမှန် ကောက်သစ်စားပွဲတော်၏ အရသာကို ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်သည့် အခွင့်အလန်းတစ်ရပ် ရရှိမည့်အပြင် ဒေသခံပြည်သူများ ကျင်းပကြ သော သီးနှံရိတ်သိမ်းပွဲကိုလည်း ပျော်ရွှင်စွာပါဝင် ဆင်နွှဲနိုင်မည် ဖြစ်ပါ သည်။
ချင်းဒေသခံပြည်သူများသည် ချင်းနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို မေလတွင် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပျော်ရွှင်စွာ အတူတကွ ကျင်းပလေ့ရှိကြသည်။ ထိုပွဲတော်တွင် ဒေသခံများသည် ကုန်ဆုံး သွားသော နှစ်ဟောင်းများကို နှုတ်ဆက်ခွဲခွာ၍ ခမ်းနားသော ပျော်ရွှင်မှုများ၊ ကျန်းမာခြင်း ဆုတောင်းများနှင့်အတူ နောင်လာမည့် နှစ်သစ်ကို ကခုန်ခြင်းများစွာဖြင့် ကြိုဆိုလေ့ရှိကြ သည်။ ချင်းဒေသခံပြည်သူများသည်ရန်အောင် ခြင်း အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် “ဆလံ” အကကိုလည်းပျော်ရွှင်စွာ ကျင်းပလေ့ရှိကြသည်။
ခွါဒိုပွဲတော်သည် ချင်း(ဇိုမီ)လူမျိုးတို့၏ ရိုးရာပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ချင်း(ဇိုမီ)လူမျိုးတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုအလေ့အထများအားလုံးအား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရည်ညွှန်းသော ဤဘာသာရေးပွဲတော်ကို ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်များ အသေးစိတ်ဖော်ပြလိုက်နာရင်း အဖွဲ့လိုက်ကျင်းပဆက်နွှဲလေ့ရှိသည်။ ကောက် ပဲသီးနှံများကောက်ရိတ်ပြီးချိန်တွင် ကျင်းပခြင်းဖြစ်သောကြောင့် စိုက်ပျိုးနှစ်တစ်နှစ်၏ အောင်မြင်စွာ ရိတ်သိမ်းခြင်းအတွက် ဂုဏ်ပြုကျင်းပခြင်းဟုခေါ်ကြသည်။ ဇိုမီတို့၏ ပြက္ခဒိန်သည် စိုက်ပျိုးရာသီပေါ် မူတည်၍ တွက်ဆခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ဤပွဲတော်သည် လာမည့်စိုက်ပျိုးနှစ်ကာလအတွက် ကြိုတင် ပြင် ဆင်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဒေသခံအခေါ်အဝေါ်အရ ခွန်ခမ်ပဝီဟုခေါ်ကြသည်။ ဆိုလိုရင်းမှာ စိုက်ပျိုးရာသီပေါ်မူတည်၍ နှစ်တစ်နှစ်ကို ခွဲထုတ်သောပွဲတော်ဟူ၍ဖြစ်သည်။ လာမည့် စိုက်ပျိုးနှစ်အတွက် စိုက်ပျိုးမြေလယ်ယာများအားအချို့သော ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်အညီ ဆုံး ဖြတ်ခြင်းသည် ဤပွဲတော်၏ အရေးအပါဆုံး၊ အရေးအကြီးဆုံးလုပ်ဆောင်မှုပင်ဖြစ်သည်။